Dagaalka Somaliland iyo Puntland oo xoogeystay iyo xildhibaan Canjeex oo la qabsaday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalka Somaliland iyo Puntland oo xoogeystay iyo xildhibaan Canjeex oo la qabsaday
Wararka ka imaanaya gobolka Sanaag gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Booda-Cad ayaa sheegaya in halkaasi uu dagaal aad u culus ku dhexmarayo ciidamo ka kala tirsan maamulada Somaliland iyo Puntland, iyadoona dagaalka la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Dagaalkaasi oo bilawday subixii hore ee maanta ayaa waxay ciidamada Somaliland ku qabsadeen deegaano badan oo ka tirsan Puntland, iyagoona sidoo kale gacanta ku dhigay xildhibaan Maxamed Faarax Aadan Canjeex oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Puntland iyo ilaaladiisa.
Xildhibaan Canjeex iyo ilaaladiisa ayaa la qabtay xilli ay marayeen goobaha lagu dagaalamay, waxaana ay saraakiisha Somaliland sheegeen in Puntland ay saakay weerar kusoo qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidanka Somaliland.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland, inkastoo la sheegayo inay qasaare xoog leh jiraan.
Dhinaca kale, waxaa dhaq dhaqaaq ciidan oo aad u xoogan laga soo sheegayaa deegaano u dhaxeeya Xiingalool iyo Dhahar, waxaana deegaanada Sanaag Bari ay Somaliland ka wadaa diiwaan gelinta cod bixiyeyaasha doorashada sanadka soo socda ee Somaliland ka dhici doona.
Lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doono, balse maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa isku haysta deegaanada hoos-yimaada gobalada Sool iyo Sanaag, waxayna arrintaasi xilli kasta sababtaa inuu labadaasi dhinac dagaal dhexmaro.